Indlebe ukubhoboza - ubuhle asiphelelwa isikhathi
Igama elithi "ukubhoboza" akulula kangako ukubamangaza ubani. Esikhathini simo we ethandwa kakhulu izindawo bodmoda (umzimba ukuguqulwa -. Ukuguqulwa Body (ngesiNgisi)), ke akunakuphikwa, futhi sekuyisikhathi eside emgqeni wokuqala. Futhi phakathi nezinhlobonhlobo zezilwane punctures omunye izintandokazi iyona ukubhoboza ezindlebeni zakhe.
Le ndoda neminyaka ngesihluku wafuna zokuhlobisa umzimba wakhe, futhi ngaleyo ndlela ekahle ncamashi lokhu yaba indawo yezimpi izindlebe. Ziyakwazi evuleleke amehlo kwabanye, futhi kalula amehlo. Ngempumuzo endlebeni anatomy esikuwo uyinkimbinkimbi, futhi ivumela ukusebenzisa zicatshangwe kunazo fantasy namacici abathandi. Ngaphezu kwalokho, ukubhoboza endlebeni uphulukisa ngokushesha kunokuba kwezinye izingxenye zomzimba.
Fashion umkhakha akayekanga ukusizakala lokhu futhi wenza namacici-accessory, engakutholanga isikhathi, futhi igama elithi "Ukubhoboza" usuphenduke into efanayo ocansini isikhalazo. Nokho, ukuguqulwa ezindlebeni ungalilahli kuphela ngentando tebuciko - ke futhi ikuvumela ukuba balahle amalebula ukugqama esixukwini, ukuze ujoyine isitayela unformatted noma nje eduze ngokomoya izithixo zabo.
Kukholakala ukuthi fashion umzimba ukubhoboza setha nesiko laseNtshonalanga. Lesi sitatimende kuyiqiniso kuphela ingxenye, ngoba "isebenza" kuyinto nje ezweni lanamuhla. Phela, isibonelo, eYurophu ubudala bhoboza izindlebe bekufanele bazidle kuphela kubantu okuqondene amaqembu athile omphakathi kanye amakilasi. Kodwa umphakathi okuqhubekayo wathatha gxuma omkhulu, futhi indlebe ukubhoboza saphela ezejwayelekile umzimba. subculture lokungakahleleki wakwenza imfanelo yakhe siqu, okuwuphawu, uphawu bekhalaza. Yilokho utshelwa umphakathi ukuba ngithuthe bendabuko Lobe ukubhoboza namacici ukuba zokuhlobisa bacishe bayifunda yonke indlebe.
Njengamanje, singaqiniseka engaba yishumi Ukwehlukana the eziyisisekelo indlebe ukubhoboza. Yiqiniso, amalungu ngoludala kakhulu umphakathi pay inkokhiso emasikweni nasezimfundisweni kungagcini wokubhoboza iyizingxenye. Okuningi zokudala futhi kwakwakhiwa, kuphambene ngohlaka ezivamile, begwazwa futhi ngokusebenzisa, ngisho uqwanga ngokuhleba. Vele comrades eyeqisayo ifakwe ezindlebeni zakhe imigudu ovulekile futhi avaliwe (ipulaki) kanye nabantu kakhulu-eziphambili bayakwazi ukuhlanganisa kwelinye indlebe zonke izinhlobo punctures.
Indlebe ukubhoboza kakade sekube ngasuthi iyingxenye ebalulekile isithombe abantu abaningi, kungakhathaliseki yabo ubulili, ubudala, isivumokholo, ubungcweti. Kodwa kungani eminye uthole ukulinganisela phakathi imfashini isitatimende kanye nesitayela ayo, kuyilapho abanye bheka engenangqondo ezidabukisayo? Imfihlo itholakala hhayi kuphela ebukhoneni umqondo womuntu uma buqhathaniswa futhi ukunambitheka kanye ingqondo. A indima ebalulekile kakhulu kudlala nangesimo sengqondo somuntu siqu: uma kukhona abantu abenza ukuthi bathi futhi ngubani Positioning yena. Amapunk, goths nezinye nabalandela nemikhutshana kuleso uyobheka organic kakhulu nge ohambelana ezihibeni yangaphandle, ngisho ukubheka ukubhoboza indlebe kanye nezinye izitho zomzimba uzobangela imizwa iphikisana kakhulu, kodwa noma kunjalo, lezi ukubhoboza nezinto zokuhloba is ngokuvumelanayo kakhulu angena isithombe.
Kuyacaca ukuthi umsebenzi ebhange nge Umhubhe noma uthisha esikoleni nge 'umgoqo' ku ishiya noma icici uyobheka kancane engenangqondo ngokupheleleyo aphume endaweni maqondana, okungenani, endaweni yomsebenzi. Kodwa zikhona phakathi intsha real izisulu imfashini abazimisele mindlessly kopisha bese "zama" konke ngandlela-thile akunakubangelwa ubukhazikhazi kanye nesitayela. Abanaso obakhathalelayo zabo "Mina", kubaluleke kakhulu ukuba isicucu ithani elilodwa lensimbi nangomthofu exponentially ukwandisa isibalo izimbobo emzimbeni. Abazi bacabanga ukuthi ukweqisa enjalo angagcina ngizithola futhi eminye impango ukuphila. Phela, uma umgodi omncane Lobe ukuphulukisa ngokuhamba kwesikhathi, emgodini omkhulu ngakwesokunxele ngemva Umhubhe isivele engadingekile, nje hang ngesimo unaesthetic isikhumba patch. Ngiyavuma, hhayi emehlweni kujabulise kakhulu, futhi alungise kungenzeka kuphela ngosizo ukuhlinzwa. Ngakho-ke, uma wenza indlebe ukubhoboza, noma inkaba, noma ekhaleni - kubalulekile ukuthi lokhu kwakwenziwa ngamabomu, ngokucophelela, futhi musa konakalisa umbono nesitayela sakho.
Tattoos: ngamajamo weJiyomethri. okusho tattoo
Yokukhipha bikini ekhaya
Mehendi esandleni: umlando, izici isicelo kanye imidwebo
Ushukela nokunamathisela shugaring: kanjani ukuzenzela okwakho
Tshela ukuthi ukuphuza ukushisa
Indlela yokwenza Topper ikhekhe eyedwa?
I-anorexia-Angelina Jolie - Iqiniso Noma Indaba Eqanjiwe?
I yacht kuwufanele $ 310 izigidi ezingu uzokwazi ukugibela club elite yangasese
Kuhle Amabha Saratov: izithombe nokubuyekeza
Kanjani ukuze ufunde ukuba ekhama kusuka ekuqaleni? Kanjani ukwenza push-ups ekhaya
Russia Izimpawu zokubekisa zase. echibini uNero
Umshini Homemade for imimese ezihluthulelwe isiyingi: ezibekiweko lobuchwepheshe kanye imidvwebo
Isifinyezo ifilimu "ukuphila Uninvented" 1 kuya 16 th uchungechunge